Somali to Danishka Turjumaanka Soomaaliga | Danishka-Turjumaada iyo Qaamuuska Af-Soomaaliga ee Online - Lingvanex.
Soomaali ilaa Danishka
U isticmaal abka tarjumaadda Lingvanex turjumaad kasta oo bilaash ah oo Soomaali ilaa Danishka ah. Waxaan u adeegsanaa tignoolajiyada turjumaada mashiinka iyo sirdoonka macmalka ah ee turjumaanka Danishka ee bilaashka ah ee Soomaaliga.
Ka soo tarjun af-soomaali una tarjun Danishka onlayn
Ma u baahan tahay inaad ka turjunto iimaylka alaab-qeybiyaha Danishka ama mareegaha fasaxaaga dibadda? Lingvanex waxa uu soo bandhigaa barnaamijyo iyo barnaamijyo isla markaaba af-soomaaliga uga tarjuma Danishka!
Ma u baahan tahay tarjumaad Danishka? Aan samayno!
Adeegga bilaashka ah ee Lingvanex wuxuu isla markaaba u tarjumaa ereyada, weedhaha cod, faylalka maqalka ah, podcast, waraaqaha, iyo bogagga shabakadda Danishka una tarjuma Soomaaliga iyo ka Soomaaliga una tarjuma Danishka.
Codsiyada tarjumaadda Lingvanex ayaa ku caawin doona wakhti kasta! Codsiyadayada ku shaqeeya aaladaha kala duwan - android, iOS, MacBook, kaaliyeyaasha smart ee Google, Amazon Alexa, iyo Microsoft Cortana, smartwatches, browsers kasta - waxay gacan ka geysan doonaan turjumida Af-Soomaaliga oo loo rogo Danishka meel kasta! Way fududahay waana bilaash! Lingvanex waxa kale oo ay bixisaa turjumaada onlaynka ah ee laga bilaabo Danishka una guuro soomaali.
Af-soomaali ilaa Danishka tarjumaadda af-soomaaliga ee Lingvanex ayaa kaa caawin doonta inaad hesho tarjumaad hufan oo kelmado, weedho, iyo qoraal ah oo Soomaali ilaa Danishka iyo in ka badan 110 luqadood oo kale ah.
Adeegso codsiyada Lingvanex si aad si degdeg ah oo degdeg ah ugu turjunto qoraal Soomaali ah Danishka bilaash. Lingvanex waxa uu bixiyaa beddel la heli karo oo Google ka beddelka adeegga turjumida ee Soomaaliga una gudbiya Danishka iyo ka Danishka oo loo beddelo luqadda Soomaaliga.
Sidee u shaqeysaa tarjumaada qoraalka Af-soomaaliga To Danishka?
Adeegeena turjumaada waxay isticmaalaan matoorka mishiinka turjumaada ee Lingvanex si uu u turjumo qoraalka aad ku qortay Soomaaliga. Mar kasta oo aad ku qorto kelmad, kelmad ama weedh af-soomaali ah – waxaanu codsi API u dirnaa matoorka Lingvanex si uu u tarjumo. Taa baddalkeeda, adeegga tarjumaada ee Lingvanex waxay soo celiyaan jawaab qoraal ah oo la turjumay Danishka. Lingvanex waxay isticmaashaa tignoolajiyada horumarsan sida sirdoonka macmal (waxbarasho qoto dheer), xog weyn, API-yada webka, xisaabinta daruuraha, iwm. si loo bixiyo tarjumaad tayo sare leh. Waxaad hadda hubin kartaa tayada turjumaada Af-soomaaliga una gudbiso Danishka hadda.
Maya. Ma soo dejisan kartid Isla markiiba waxaad isticmaali kartaa turjumaadayada Danishka onlayn ee boggan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku rakibi kartaa qalabka fidinta chrome ee loo yaqaan Lingvanex - Turjubaanka iyo Kordhinta Qaamuuska Chrome. Ama isticmaal codsiyadayada turjumaada - isku xirka codsiyadan ayaa ku yaal bogga. Marka qalabkan turjumaada la rakibo, waxaad iftiimin kartaa oo midigta guji kartaa qaybta qoraalka oo guji "Turjumi" sumadda si aad u turjunto. Sidan ayaad uga turjumi kartaa af-soomaali kaliya una turjumi karta Danishka, laakiin sidoo kale waxaad ka turjumi kartaa 36 luqadood oo codsigu taageerayo. Sidoo kale, waxaad ka turjumi kartaa bogga af-soomaaliga Danishka adigoo gujinaya "Turjumi" calaamada browserka
Intee in le'eg ayay tahay tarjumaada af-soomaaliga ee loo turjumay Danishka?